Faallo: Madaxweyne Cabdullahi Yuusuf iyo Ra’iisul Wasaare Geedi oo ku loolamaya Siyaasadda dalka Soomaaliya, balse Itoobiya maxay damacsan tahay?.
October 9, 2007 by jilyaale
Hadalkaan Qabyaaladeed markuu faafay shalay oo soo gaaray Magaalada Muqdisho kana war helay Ra=iisul Wasaare geedi ayaa durbadii wuxuu billaabay inuu kulmiyo Wasiirada hawiye ee ku jira golahiisa, ka dibna wuxuu raadiyey sidii uu u la heshiin lahaa Golaha Odayaasha beelaha hawiye ee dowladdiisa ka soo horjeeday, si kasta ha ahaatee arrintaas waa fushay, balse wixii ballan ahayd ayaa la sugayaa fulinteeda.
Magaalada Baydhabo ayaa lagu soo warramayaa inuu ka socdo shalay ilaa iyo maanta Dhaq dhaqaaqa siyaasadeed oo wajiyo badan leh, kaasoo u muuqda mid labada mas’uul ay ku hardamayaan cidii Dalka hogaamin laheyd.
Dadaaladan xooga badan ee uu wado Madaxweynaha ayaa ah mid uu ku doonayo inuu ku wiiqayo Awooda Ra’iisul Wasaaraha ee ah hogaaminta Xukuumada Soomaaliya, waayo Mudane geedi wuxuu doonayaa in maamulka dowladda in loo daayo isaga, balse Oday Cabdullaahi Yuusufna wuxuu doonayaa in isaga looga dambeeyo Siyaasadda iyo maamulka dowladda, taasi waa loolan aan meesha ku jirin, haddii loo noqdo dastuurka lagu soo dhoodhoobay Mbegati.
← Ra’iisal wasaaraha Dowladda KMG Cali Maxamed Geedi iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray magaalada Baydhabo.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Maxamed Dheere oo ka hadlay degganaanshaha magaalada Muqdisho 48-dii saac ee la soo dhaafay. →